अभिनय चोर्नेका, लाखे हल्ला ! » Nepal Fusion	Nepal Fusion	अभिनय चोर्नेका, लाखे हल्ला ! » Nepal Fusion
अभिनय चोर्नेका, लाखे हल्ला !
नेपाली फिल्मका लागि चोरी शब्द पर्यायजस्तै बनेको छ । कहिले हलिउड/बलिउड फिल्मबाट हुबहु कथा नै चोरी भएको आरोप लाग्ने गर्छ भने कहिले संवाद दुरुस्तै चोरिएको आरोप नेपाली फिल्म क्षेत्रका लागि पुरानो भइसकेको छ । कथा मात्र होइन पोस्टर समेत चोरिएको आरोप लाग्ने गर्छ फिल्मकर्मीलाई । यसबीच, चैत २२ गतेबाट देशभर प्रदर्शनमा आउन लागेको अभिनेता प्रदीप खड्का स्टारर फिल्म ‘लभ स्टेशन’ पनि एक टर्कीको फिल्मबाट प्रभावित भएर निर्माण भएको देखिएको छ ।
नेपाली फिल्मको काटकुट बजेट उही ७० लाख हाराहारी हो । उदार निर्माता भए पनि करोड माथि जाँदैन । यस्तो ओपन सेक्रेट तथ्य छरपष्ट हुँदा पनि हाम्रा नायकहरु नाक फुलाउँदै पारिश्रमिक आधा करोड भएको धक्कु लगाउन छाड्दैनन् ।
०७५ मा त यो क्रम ह्वात्तै बढ्यो । अभिनेता अनमोल केसी, प्रदिप खड्काले बारम्बार ५० लाख पारिश्रमिकको डंका पिटिरहे । ल ठिकै छ पत्याइदिउँ यी दुईका कुरा । दुवै हल्का चलेकै अभिनेता हुन् । भर्खर फिल्म क्षेत्रमा तंग्रिन खोज्दै गरेका अभिनेता पुष्प खड्का पनि ‘५० लाख नभई त फिल्म खेल्दिनँ’ भन्न थालेको गाइँगुइँ बाहिरियो वर्षान्ततिर । पुष्पको छवि आफैँ लगानीकर्ता भएर हिरो हुने रहर पूरा गर्नेको सूचीमा छ । उनका फिल्म खासै चलेका पनि छैनन् । उनले यस बीचमा ‘दपर्णछाँया–२’, ‘मंगलम्’मा अभिनय गरे । दुवै फिल्मको औसत रहे । ‘दाल भात तरकारी’ पोस्ट प्रोडक्सनमा छ ।
दार्जि्लिङतिरका एक निर्देशकले फिल्मको अफर गरेको र उनले ५० लाख पारिश्रमिक माग गरेको खबर बाहिरियो । पुष्प निकटको दाबी पत्याउने हो भने ती निर्देशक उनले बनाउन लागेको फिल्ममा उनलाई अभिनय गराउन मरिहत्ते गरिरहेका छन् तर पुष्प डिमान्ड घटाउने मुडमा छैनन् रे ! माहोल हेर्दा ५० लाख डिमान्ड गरेको भन्दा पनि गरेको हल्ला फिँजाउने मनसाय प्रष्टै देखिएपछि के धेरै चर्चा गर्नु ? पुष्पको फन्डाले काम गरोस्, शुभकामना ।